Gabdho loo diyaarinayo in ay u ciyaaraan Xulka Qaranka K/Kolayga Soomaaliya
» Gabdho loo diyaarinayo in ay u ciyaaraan Xulka Qaranka K/Kolayga Soomaaliya
Gabdhaha loo diyaarinayo Xulka Qaranka Soomaaliya oo ka kala yimid dalalka Ingiriiska, Jarmalka iyo Sweden ayaa waxaa diyaarintooda isku howlay Ururka Gabdhihii Kubadda Kolayga ee Qaranka Soomaaliya, iyadoo ay gacan ka helayaan Macallimiintii Kubadda Kolayga Soomaaliya sida Macallin Shiine Guhaad, Macallin C/llaahi Xasan Dhaqaale.
Gabadhan oo caawa ciyaaray ciyaartoodii ugu horreysay oo lagu eegayo mustaqbalkooda Kubadda Kolayga ayaa waxaa muddo 10 cisho ah tababar lagu soo siiyay Magaalada Katrinholm ee dalka Sweden, iyadoo ay arrintaas si weyn isugu howleen Baarliin Cadaawe, C/llaahi Dhaqaale iyo Shukri Dhalbaas oo mudadii ay tababarka ku jireen waqti iyo wax kasta u huray.
Waxaa gabdhahan mar kale tababar lagu siin doonaa Magaalada London ee dalka Ingiriiska, iyadoo uu marti-gelin doono Macallin Shiine Guhaad oo si weyn ula dhacay qaab ciyaareedka gabdhahan oo la isku raacay in ay mustaqbal Isboorti oo dhinaca Kubadda Kolayga ah leeyihiin. Kaddib waxa ay ciyaar saaxibtinimo la yeelan doonaan Koox Swedish ah oo ka dhisan magaalada Malmö, iyadoo uu martigelin doono Ismaaciil Jamaica oo ka tirsanaa ciyaartoydii Wakaaladdii Madbacada Qaranka ee Soomaaliya.
Gabdhihii Hore ee Xulka Qaranka K/Kolayga Soomaaliya:
Shukri Maxamed Nuur (Dhalbaas) oo tababare u ahayd gabdhaha la diyaarinayo
Miski Cumar Cusmaan
Baarliin Maxamuud Cadaawe
Deeqo Xasan Axmed (Deeqo Buyo)
Gabdhaha loo diyaarinayo Xulka Qaranka K/Kolayga Soomaaliya oo uu la jiro Macallin C/llaahi Dhaqaale
Naciimo Axmed Muuse
Xamdi Gurxan Cilmi
Nadra Ciid Jaamac
Ugu dambeyntiina, kulan tijaabo ah oo lagu eegayo qaabka ciyaareedka gabdhaha loo diyaarinayo Xulka Qaranka Kubadda Kolayga Soomaaliya ayaa wuxuu dhexmaray gabdhihii hore ee Xulka Qaranka Kubadda Kolayga Soomaaliya, waxaana kulankan ku adkaaday gabdhaha loo diyaarinayo Xulka Qaranka Soomaaliya, iyadoo ciyaartii dhexmartayna ay ku soo gebagebowday 8--16. Salaad Iidow Xasan (Xiis), Hiiraan Online